लगानीकर्ताको आकर्षण सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावर ! – OnlinePahar
लगानीकर्ताको आकर्षण सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावर !
२८ माघ २०७७, बुधबार १७:२९ Basanta Khanal	0 Comments	share market
आज (आइतबार) सेयर बजारमा सर्वाधिक कारोबार हुने १० वटा कम्पनीहरूमध्ये १० वटै हाइड्रोपावरहरू रहेका छन् । पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको छ । आज अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ८१ करोड ८५ लाख ८७ हजार रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । धेरै कारोबार हुने दोश्रो कम्पनीमा अरूण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको ६० करोड ५० लाख ३४ हजार रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरूको तेश्रो नम्बरमा युनिभर्सल पावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको ५४ करोड ४४ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । सर्वाधिक कारोबार हुने अन्य कम्पनीहरूमा ङादी ग्रुप पावर, बुटवल पावर, राधी विद्युत, अरूण काबेली, सानिमा माइ हाइड्रोपावर, अपर तामाकोशी र सिनर्जी पावर रहेका छन् ।
← साताको पहिलो दिन युनियन लाइफको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट, साढे ५ लाख बढी कित्ता खरिदमाग
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २५ साउन २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं →